I-OTK-J3 Bafang Motor 250W Electrice Cargo Trike Yomndeni, China OTK-J3 Bafang Motor 250W Electrice Cargo Trike Yabakhiqizi Bomndeni, Abahlinzeki, Ifektri - Ezokuthutha Zithokozise (Changzhou) Ebike Co., LTD
I-OTK-J3 Bafang Motor 250W Electrice Cargo Trike Yomndeni
I-OTKARGO J3 trgo cargo trike eyenzelwe abazali abasebenzayo. Ibhayisikili lezimpahla lilingana cishe nabo bonke abagibeli ngenxa yohlaka lokungena oluphansi olunesiqu kanye nokuthunyelwe kwesihlalo. Ngebhethri le-lithium le-36V kanye ne-250W BAFANG hub motor, i-OTKARGO J3 ilungele uhambo olude lomndeni.
Iyanda imindeni efuna izindlela zokuhamba ngekhabhoni ephansi, i-OTKARGO iyisinqumo esihle. I-OTKARGO J3 inayo yonke imisebenzi yemoto, ukuthatha izingane zakho uye nazo epaki, noma uthathe inja yakho uye nayo olwandle. Futhi isikhala esikhulu sokugcina singabamba konke ukudla kwangesonto lakho.
Ngenxa yohlelo lokusiza ngama-pedal kanye namagiya ayisivinini ayi-7, ngeke ube nankinga yokuhamba uzungeze ngisho nezindawo ezinhle kakhulu zedolobha lakho.
Inesikhala esikhulu sokugcina, amahanisi okuvikela, izihlalo ezinethezekile zezingane nombhede wemvula, i-OTKARGO J3 ilungele zonke izidingo zokuhamba zomndeni wakho.
Ikhava yemvula Cushion & ukhaphethi Ngaphambili / ilambu langemuva Ikhava yebhayisikili
UMax.speed I-25 km / h (i-EU) motor BAFANG 250W ubude 2270mm
transmission Isivinini segiya esingu-7 Khombisa I-LCD ububanzi 870mm
Uzimele steel Battery 36V 12.8AH Ukuphakama 1170mm